14 yeakanakisa emaemaappe ekukubatsira iwe kuti uwane inbox zero
Email. Ugh. Kungoona iro izwi kunogona kuunza wave kunetseka pamusoro pedu sechinhu chero chipi zvacho.
Inotambisa nguva, inosanganisa hupenyu hwehunyanzvi uye hwega, uye hazvigoneke kuronga. Zvakanaka, ndoda. Mukati memakore mashoma apfuura, akati wandei matsva emaemailapps akabuda, aine tarisiro yekukubatsira iwe kuwana imwe yemukati zen.
Iyo yakanakisa huropi yekudzidzisa maapplication nemitambo
Iyo zen inouya iri muchimiro cheinbox zero, email management dzidziso yakanangana nekuchengeta yako inbox isina chinhu nguva dzese. Icho chinangwa chakakwirira chechokwadi, asi kana chiri chinhu chaunofarira, tarisa maapplication pazasi. Takatora mhinduro dzakanakisa dzeApple neIOS dzakakodzera kuyedzwa.
Ramba uchifunga kuti kwete ese eaya maapplication ane zvese nezve inbox zero, asi iwo ane maficha akagadzirirwa kuemail-kujekesa, uye ese akagadzirwa zvakanaka, anoshanda, uye anoita basa rekubata neemail zvishoma kushivirira. Asi zvishoma chete.
Yakanakisa inbox-zero email maapp
Wona paApple App Store
Dispatch inoonekwa seimwe yeakanakisa email maapuro eApple, kunyanya nekuti inotsigira yechitatu-bato maapplication. Iwe unogona, semuenzaniso, kuchengetera akakosha mameseji kuna Evernote kana chengetedza zvinongedzo kuti uverenge gare gare nePocket. Iyo app zvakare inotsigira email aliases. Iwo mashoma ezasi ezasi anosanganisira hapana rutsigiro rwePOP / Shanduko-yakavakirwa email kana yemuno Push.
Wona paGoogle Play Chitoro | Wona paApple App Store
Boxer iemail, karenda, uye maapplication eakavakirwa akakomberedza masaini, nechinangwa chekukurega uchisveta maemail kusvika iwe wasvika mubhokisi rezvinyorwa zero. Iyo zvakare inoratidzira ku-ita zvinyorwa, kusundira Notices, uye dhibhodhi yezvinhu zvakakosha zvinhu, pakati pezvimwe zvakawanda zvinonakidza zvinhu. Iyo inototsigira ese makuru maemail vanopa anosanganisira Gmail uye iCloud (kunze kwePOP3-based email).
TypeApp Mail, senge mamwe emamwe maapps pane ino rondedzero, inotsigira ese makuru maemail vanopa uye, zvinonyanya, maPOP3 maakaunzi. Iyo inopa yakabatana maakaunzi ruzivo, yakasungwa hurukuro, smart kusundira notices, uye ese ari maviri mamiriro uye portrait maonero.
Spike haisi yechinyakare email mutengi. Iyo inoshandura maemail ako kuva mameseji kana hurukuro, zvakaita senge iwe waungaona mune yekutumira mameseji. Iyo inotsigira Google, Yahoo, AOL, uye maaccount eICloud, uye inoratidzira zvizvarwa zvekusundidzira notices, mapoka, uye kufona Inopawo yakasviba modhi.
Triage - yakafanana neHop - haisi yechinyakare email mutengi. Iko hakuna maforodha, semuenzaniso.
Iyo inongoratidzira maemail ako seyakaunganidzwa emakadhi, uye iwe unoshambadzira kadhi retsamba kuti urichengetedze kana kurichengeta. Kana iwe uchida kupindura kana kutumira meseji, ingo rova ​​pakadhi kuti uburitse zvimwe zvingasarudzwa. Triage inotsigira Gmail, iCloud, uye imwe IMAP-based email.
Newton Mail ndeye email yakabatana app inotsigira Gmail, Exchange, Outlook, iCloud, Google Apps, uye chero IMAP account. Iyo zvakare inosangana neyechitatu-bato maapplication, akadai saEvernote naTrello, uye inotsigira masevhisi aya kuburikidza nechimwe chinhu chainodaidza kuti "makadhi". Iyo inokutendera iwe kungoisa email mune imwe app, saTodoist. Iyo mhinduro hombe kune simba-email vashandisi. Nekudaro, zvinoda kunyoreswa kwe $ 49.99 pagore.
Gmail yakakwana kune avo vakasungirirwa kuGoogle services. Izvo zvinokutendera kuti uchinje pakati pemaakaunzi kana kuzviona zvese kamwechete, ona mapikicha mifananidzo sechikamu chehurukuro dzakapetwa, pindura kuGoogle Calendar inokoka yakananga kubva mukati meapp, uye kuronga nekuchengetedza, kunyora mazita, nyeredzi uye nezvimwe.
Iyo Android vhezheni inotsigirawo vanokwikwidza email vanopa seYahoo uye Outlook.
Outlook yeApple uye iOS inotevera-chizvarwa app. Inotsigira Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com, iCloud, Gmail, Yahoo Mail, uye IMAP account, inovhara ese anozivikanwa eemail services. Iyo inoratidzira zvigadziriswe zvinokurumidza-swipe sarudzo dzekuchengetedza uye kuronga maemail, inoputsa yako inbox muzvikamu zviviri ("Inotarisisa" uye "Zvimwe), uye inoita kuti uise zvinhu senge mareza anomiririrwa kana asina kuverengwa.
Iyo zvakare inosanganisa ako makarenda uye mafaera kubva kumasevhisi seGoogle Chalenda, Google Drive, Dropbox, OneDrive, nezvimwe.
Kana iwe uchida iyo inbox zero pfungwa, pamwe neyakagadziriswa, nekukurumidza kutsvaira zvigadzirwa, funga Spark neReaddle. Iyo inopa mapfupi uye marefu swipes (ese ari maviri kuruboshwe uye kurudyi), uye ivo vanogadzikana zvachose. Unogona kupfupisa swipe kurudyi kuchengetedza meseji, semuenzaniso, kana refu swipe kurudyi kudzima. Spark inopawo mabheji, ichikubvumidza iwe kuti uone kuverenga kune rako rese inbox, pane kungoverenga meseji.
Spark zvakare ine yakatsaurirwa Apple Watch app.
Iyo MyMail app yakanyatsogadzirwa uye inozivikanwa nekugona kwayo kwekungo dhonza mumifananidzo uye marogo emaemail. Saka, pane iyo iPhone, haufe wakamboona denderedzwa riine chena "M" yaMaggie kana chero. MyMail zvakare inoita kuti zvive nyore kuchinja pakati pezvinyorwa. Isu tinongoshuvira dai yanga yatsvaira-ku-dura.
Oo, uye iyo yeApple app haina kutaridzika seyakagomarara-isina. MyMail inotsigira Gmail, Hotmail, Live, Outlook, Yahoo, MSN, iCloud, uye AOL, nezvimwe.
Wona paGoogle Play Chitoro
Aqua Mail inogadzira mabhokisi uye emafaira akareruka kufamba, nekuda kwemavara-akanyorwa-mavara uye kugona kuputsa maforodha ese mukati meimwe email account. Iyo app zvakare inotsigira swipe masaini uye inopa nyore-ku-kuona zviito mabhatani, kurerutsa mabasa sekupindura, kutumira mberi, uye kudzima maemail. Isu tinodawo kuti inotsigira yakarongedzwa zvinyorwa, kuti iwe ugone kusimbisa, kushinga, italics, uye mavara mavara.
Aqua Mail inotsigira Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, iCloud, GMX, AOL, nezvimwe.
Email Shanduro + neMailWise
Email Exchange + neMailWise inoratidzira yakabatana inbox ine kugona kurongedza mameseji ako nekuverenga, kusingaverengwe, nyeredzi, isina nyeredzi. Iyo zvakare ine simba swipe manenji, kugona kuratidza ako maemail mune yakasungirirwa maonero, kuitira kuti maemail ako afanane nechimwe chinhu chakafanana nekutumira mameseji. Icho chinhu chinopenya. Tsigiro inosanganisira Exchange, Outlook, Hofisi 365, Hotmail, Gmail, Google apps, Yahoo, AOL, nezvimwe.
ProtonMail yakakwana kune vashandisi vanoda email yakachengeteka uye yakachengeteka. Yakagadziriswa nevadzidzi kuCERN, ProtonMail inopa magumo-kumagumo kunyorera saka hazvigoneke kune chero mumwe asi iwe nemumwe munhu wauri kutumira tsamba naye kuti uwane maemail ako. Unogona kuseta timer kuitira kuti maemail auri kutumira azviparadze pane imwe nhanho mushure mekutumira iwo.
Chinokanganisa iko kuchengetedzeka ndechekuti iko kunyorera kunoda ProtonMail nyowani chaiyo kero yeemail, asi kana iwe uchinetseka nezvechengetedzo uye usine hanya nekumisikidza kutumira kumaakaundi ako aripo ProtonMail ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kwauri.
Blue Mail ibasa reemail rekushandisa iro rinoshanda neGmail, Outlook, Hotmail, Yahoo Mail, AOL, iCloud neHofisi 365 pamwe nekupa rutsigiro rweIMAP nePOP3 + Exchange auto kumisikidza. Iyo inobvumidza vashandisi kubatanidza isingaverengeke nhamba yeakaundi ichiita kuti ive yakakwana kune avo vari kutambudza vega, chikoro, uye basa maemail mune akasiyana maakaunzi.
Iyo zvakare inotakurirwa nezvakanakisa maficha, senge yakasviba modhi sarudzo, vanhu vanoshandura switch iyo inobvumidza iwe kuti ubvise nyore maemail kubva mubhokisi rako rekunyora, uye kugona kuwana nyore nyore chero email kubva kune waunobata nekungodzvanya pane yavo avatar.
Hedzino nyika dzinoshandisa Google neApple's COVID-19 Contact Tracing API